News | Argentina
News | Tag: Argentina
ब्राजिलले विश्वकप जित्छः म्यारोडोना
एजेन्सी । विश्व फुटबलको हस्ती डिएगो म्यारोडोनाले रसिया विश्वकपको उपाधि ब्राजिलले जित्ने अनुमान गरेका छन् ।
अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिएपछि प्रशिक्षक साम्पावलीले के भने ?
एजेन्सी । विश्वकपबाट अर्जेन्टिना बाहिरिएपछि प्रशिक्षक जार्गे साम्पावलीले ‘अब बलियो’ भएर आउने बाचा गरेका छन् । फ्रान्ससँगको अन्तिम १६ को खेलमा ४–३ गोलले पराजित भएपछि साम्पावलीले प्रतिक्रिया दिँदै आफूले यस्तो नतिजा आउँछ भनेर नसोचेको बताए ।
अर्जेन्टिना हार्दा विद्यार्थी नेताहरुको रुवाबासी
काठमाडौं । विश्कपको अन्तिम १६ मा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई ४–३ गोलले पराजित गरेपछि धेरै अर्जेन्टिना समर्थकहरुको चित्त दुखेको छ । नेपालमा धेरै संख्यामा अर्जेन्टिना समर्थकहरु रहेको कारणले गर्दा उनीहरुको पनि पक्कै चित्त दुखेकै छ ।
फ्रान्सले विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनायो, अर्जेन्टिना भने बाहिरियो
काठमाडौं । अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिएको छ । शनिवार राति सम्पन्न फ्रान्ससँगको अन्तिम १६ को खेलमा अर्जेन्टिना ४–३ गोल अन्तरले पराजित भइ विश्वकपबाट बाहिरिएको हो ।
विश्वकपको अन्तिम १६ को पहिलो खेलः अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई पछार्ला त ? यस्तो छ इतिहास
काठमाडौँ । विश्वकपको समूह सीको विजेता बनेको फ्रान्सले समूह डीको उपविजेता अर्जेन्टिनासँग क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
युट्युब को ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा नाइजेरियाविरुद्ध अर्जेन्टिनाको जितको भिडियो
काठमाडौं । युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा नाइजेरिया विरुद्ध अर्जेटिनाको खेलको हाइलाइट्स आएको छ । मंगलबार राति सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले नाइजेरियाविरुद्ध सनसनीपूर्ण जित निकालेको थियो ।
बल्लतल्ल अन्तिम १६ मा पुगेको अर्जेन्टिनाले फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, क्रोएशियाले डेनमार्कसँग
काठमाडौं । नाटकिय रुपमा अर्जेन्टिना विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ प्रतिद्धन्द्धी बलियो दावेदार फ्रान्सलाई पाएको छ ।
आज कुन खेल कति बजे, अर्जेन्टिनाले मार्ला त बाजी ?
काठमाडौँ । अर्जेन्टिनालाई नाइजेरियाविरुद्धको खेल कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्ने भएको छ । त्यो पनि फराकिलो गोलअन्तरले ।
मास्चेरानोले भनेः नाइजेरियाविरुद्ध मेसी विशेष रुपमा प्रस्तुत हुनेछन्
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका डिफेन्डर जाभिएर मास्चेरानोले नाइजेरियविरुद्धको खेलमा लियोनल मेसी फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।